Ogaden News Agency (ONA) – Mareykanka oo Weerar Ka Fuliyey Sh/Hoose.
Mareykanka oo Weerar Ka Fuliyey Sh/Hoose.
Posted by ONA Admin	/ September 14, 2018
Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in weerar cirka ah oo ay ka fuliyeen 11-kii bishan tuulada Mubaarak ee gobolka Shabeelaha Hoose inay ku dileen laba ka mid ah al-shabab, mid kalena ay ku dhaawaceen.
War qoraal ah oo ka soo baxay Taliska Mareykanka ee Africa ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi la fuliyay markii ciidamada wada jirka ah ay weerar kala kulmeen al-shabab. Warka ayaa intaasi ku daray in intii uu weerarka socday uu sidoo kale ku dhintay mid ka mid ah askarta Soomaaliya, laba kalena ay ku dhaawacmeen.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in ciidamaddii Mareykanka ee howlgalka ka qeyb galay ay soo noqdeen iyagoo bedqaba, isla markaana Taliska Mareykanka ee Afrikom uu baadhayo haddii ay jirto cid rayid ah oo weerarkaasi wax ku noqotay.